Penghormatan Buat SAMM Pahang Yang Menyertai Perarakan Hijau 300km Anti-Lynas
[WASPADA] Penggunaan Applikasi 'GEOLOCATION" Boleh Undang Jenayah
အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်ဟု သံသယရှိသော ရခိုင်ဘုန်းကြီး ၅ ပါးအား မဟန နှင့် ၀န်ကြီး မှ သတိပေးရန် ခေါ်ယူ
Adnan Yaakob Sudah Kecut, Tak Kasi Potong Telinganya
Figurative Language..belajar sikit2 k..^_^
Allah Juga Pilih DAP Di Penang, PKR Di Selangor, PAS Di Kedah & Kelantan untuk berkuasa...
Why I disagree with Arabic media’s demonization of Israel by By AHMED ABDEL-RAHEEM
The Silence Of our beloved Daw Aung San Suu Kyi, NLD, Democrats, President U Thein Sein and other Friends have hurt our feelings
Seriously, What The Heck Is Wrong With The System?
Posted: 01 Dec 2012 10:09 AM PST
I took off from the Umno general assembly for the first time, partly to focus on the Palestinian bid to secureanon-member status at the United Nations (in which they succeeded), to avoid passing on my flu to those at PWTC and also giving the final touches to my latest book 'A Journalist at War'.
However, I did follow the progress - reading reports in newspapers, watching TV, the internet and pouring calls and text messages from friends like journalists, bloggers and some delegates who attended it.
So, I am not totally lost. (My blog was also hacked for2days. I am so naive about IT but luckily I gotajourno-blogger who helped revived it).
I am still an Umno member. Since joining it in 1981, I never turned my back on it although there were times I felt flabbergasted, frustrated and annoyed with some of its leaders and at the manner in which it was and being led.
Having attended 31 of the GA thus far, I really didn't mind skipping the one just concluded. To me (I don't care what others think), its the same old story - rhetoric, showcase of power and popularity, shooting at the opposition, etc... etc - but none to admitting our own weakness and mistake.
I had writtenaseries of articles during the previous general assembly...here... here... and here... mostly on howagrassroot member like me wanted the party to change, revitalise and listen to voices on the ground.
So, what does the party general assembly means to us, the grass root members? Almost nothing, except for the calls to strengthen the party, stand united behind the leaders and continue voting for BN in the next general election. While most of the members get old in providing undivided support to the leaders and the party they adore and love, upholding the Malay supremacy in politics and keeping up with 'ketuanan Melayu', this getting-old and hard-working members can only watch and listen to glamorous stories of how their young leaders got rich and richer.
Umno isaperfect party for the Malays but the leadership must revise its approach in dealing with the grass root members. Is there any tangible explanation to their assumption and perception that those who go all out to grab any party portfolios are actually going after the money and luxury in-store for them, and not really after the responsibility? It's difficult because the facts stand very loud and clear.
The grass root members do not needaluxury car oranew better house. They want to feel being close to the top leaders. As such, they need their respective division or branch heads to channel their woes to the top leaders. They want to be heard. Solving their problems is not everything about keeping close rapport with them. What's most important is the ears lent.
The only different from this year's GA as compared to the previous one is that, 2012 is the last GA before the 13th general election. That made it so heated up and very arousing.
The level of confidence was high, and that each and every member who attended it believed the party is at its strongest level, and nobody could deny the fact that Umno is the right party for all Malays and Bumiputras in the country... that the party will remain relevant, especially in the spirit of Barisan Nasional.
However, I personally believe 2012 is where Umno has reachedacrossroad. Faced with some boiling issues such as scandals involving its ministers and Members of Parliament (MPs), its handling of some chronic and sensitive cases (politically and socially) and also fractions within the party, Umno needs more than just the strongest support ever.
It needs dynamism to the leadership, dynamic in the sense that they must be willing to listen to the ground and make changes wanted by the majority. As the party grows and gets older, the grassroot members find it more difficult to have their voice heard at the top. The gap gets wider and wider.
The attitude of some leaders have to change. They must stop listening to liars whom they themselves invented, created and encourage. As leaders, they consider themselves as 'Mr Right', that other should only listen and abide by their words.
Worse still is those who just cannot accept criticism. I know an Umno vice president who stops communicating with me just because I criticised his ministry's failure in implementingapolicy. He also refuses listening to good advice because he thinks he is already perfect, asasenior leader andaminister.
Among his ministry's staff, most have to lie about many things, including the progress of certain policies. They simply lied to avoid being called 'failures' and inefficient. Each timeameeting is called with the minister, they have to lie since the minister does not like bad news!
It applies to Umno. Lying is the best avenue of cover up. So much so, many problems at branch and division levels were ignored because the top leaders were all this while fed with wrong information about the actual situation of the party.
This has yet to change. Those who attendaGA will usually feel his or spirit having flown over speeches by the leaders and dcelegates. However, that spirit fizzles out once the general assembly is 1 week oramonth behind them.
Of course I would love to see Umno (and BN) retains its power in the next general election. Being the pillar of BN, Umno's strength must come with wisdom and trust. If top leaders can't take criticism and advise, members should throw them out in the next party election!
Posted: 01 Dec 2012 09:10 AM PST
Thanks to SKT who sent me the following joke...
Months later, that special morning arrives, and there they are on the golf course. The first guy says, "Boy this game cost meafortune! I bought my wifeadiamond ring that she can't take her eyes off it."
"I can't believe you all went to such expense for this golf game. I slapped my wife on the butt and said, 'Well babe, Merry Christmas! It'sagreat morning -- intercourse or golfcourse --'
She said, "Don't forget your sweater."
A few days before her birthdayahusband asks his wife, "Dear, what would you like for your birthday?"
Wife: I really don't think I should say.
Husband: How aboutadiamond ring?
Wife: I don't care much for diamonds.
Husband: Well, then,amink coat?
Wife: You know I do not like furs.
Husband: A golden necklace?
Wife: I already have three of them.
Husband: Well, gosh, what do you want?
Wife: What I'd really like isadivorce.
Husband: Hmmm......... sorry, you can't. I wasn't planning on spending that much.
Thanks to Kassim who sent me this joke.
Posted: 01 Dec 2012 10:02 AM PST
Umno akan ditewaskan oleh ahli sendiri, kata Khairy KUALA LUMPUR, 1 Dis — Umno akan ditewaskan dalam pilihan raya umum (PRU) Ke-13 nanti oleh ahlinya sendiri kata ketua pemuda parti tersebut, Khairy Jamaluddin sambil menggesa semua pihak supaya setia kepada Datuk Seri Mohd Najib Razak.
Posted: 01 Dec 2012 06:18 AM PST
Posted: 01 Dec 2012 05:37 AM PST
SAMM Kebangsaan mengucapkan tahniah kepada SAMM Pahang dan mengucapkan syabas kepada adik Zamri Zanal juga dari SAMM Pahang mewakili SAMM secara keseluruhannya di dalam kumpulan berjalan kaki dari Kuantan ke Dataran Merdeka baru-baru ini. Beliau merupakan satu-satunya anak muda Melayu yang berjaya menghabiskan perjalanan sejauh 300 KM itu.
Sewaktu berada di Dataran Merdeka, beliau telah diberi penghormatan untuk membacakan deklarasi kumpulan Anti Lynas ini. Syabas dari SAMM Pahang.
Setinggi penghargaan juga diucapkan buat Penyelaras SAMM Pahang saudara Bung Hatta yang telah menyertai perarakan Anti-Lynas dari awal hingga ke akhir (walaupun tidak seluruhnya), membuktikan saudara Hatta lebih muda dari umurnya. Semoga negeri pahang berjaya menghasilkan lebih ramai anak muda berkaliber dan tahan lasak sepertimana yang dibuktikan.
Posted: 01 Dec 2012 05:36 AM PST
Posted: 01 Dec 2012 04:31 AM PST
Penggemar kemas kini 'geolocation' mampu undang jenayah harta benda, korporat KUALA LUMPUR - Pemilik telefon pintar yang gemar mengemas kini sistem 'geolocation' mereka melalui laman sosial, berisiko mendedahkan diri mereka kepada jenayah harta benda dan jenayah korporat.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman Datuk Syed Ismail Syed Azizan berkata penggunaan aplikasi yang mempunyai akses kepada 'geolocation' di mana pengguna memaklumkan kedudukan serta aktiviti mereka, dikhuatiri membuka ruang kepada berlakunya jenayah seperti pecah rumah dan rompakan.
"Ramai antara penggemar laman sosial suka mengemas kini atau 'check in' lokasi atau kegiatan mereka menerusi aplikasi seperti 'Foursquare', facebook dan sebagainya untuk memberitahu apa yang sedang mereka lakukan dan tempat hotspot yang dikunjungi atas dasar sekadar suka-suka.
"Namun tindakan ini sebenarnya menjadi faktor pendorong kepada risiko dijadikan mangsa jenayah selepas penjenayah memperoleh maklumat sasaran mereka hanya melalui alam siber," katanya kepada Bernama baru-baru ini.
"Ada pihak cuba mencari maklumat untuk menandingi pesaingnya dan sanggup berbuat apa saja bagi tujuan itu," katanya.
"Meskipun setiap aplikasi itu ternyata mempunyai kebaikan, tetapi segalanya berbalik kepada pengguna sendiri sama ada ingin menggunakan atau tidak.
"Kalau kita nak guna kemudahan ini kita kena tahu dan faham betul-betul risiko yang mungkin berlaku, kalau kita tidak mahu mengambil risiko kita jangan muat turun," katanya.
Sebelum ini, Bernama melaporkan Ketua Pembangunan Perniagaan CyberSecurity Malaysia Mohd Anwer Mohamed Yusoff sebagai berkata negara mencatat anggaran kerugian sebanyak RM2.75 bilion dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini akibat daripada jenayah siber khasnya dalam sektor kewangan. - Bernama
Posted: 01 Dec 2012 04:18 AM PST
အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်ဟု သံသယရှိသော ရခိုင်ဘုန်းကြီး ၅ ပါးအား မဟန နှင့် ၀န်ကြီး မှ သတိပေးရန် ခေါ်ယူ သတင်း – FB ( မျိုးသာကီ )
စစ်တွေမြို့တွေ အကြမ်းဖက်မီးရှို့ဖျက်စီးမှုများကို ဦးဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု ယုံကြည်ရသော ရခိုင်ဘုန်းကြီး ၅ ပါးအား ပြည်နယ် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း။ ၅ ပါးအနက် ၁ပါးမှာ ခရီးလွန်နေသည်ဟု အကြောင်းပြ ကာ ရောက်ရှိ မလာခဲ့ ကြောင်း၊ ရောက်ရှိလာသော ၄ ပါးအား ကမ္ဘာအေး စေတီဝင်းအတွင်း နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်များက ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
"ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ တည်းတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုတောင် အရင်မသွားခိုင်းပဲ တစ်ခါတည်း ကမ္ဘာအေးကို ခေါ်သွားပြီး မဟန ဆရာတော်တွေ နဲ့ တွေ့ခိုင်းတယ်၊ ပဋိပက္ခတွေကြားထဲမှာ သံဃာတွေ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပါတ်သက်ရင် ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်နဲ့ မလျော်ညီဘူးဟု" မဟန ဆရာတော်များက ရခိုင်ဘုန်းကြီးများကို သတိပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ယင်းကဲ့သို့ ခေါ်ယူသတိပေးခံခဲ့ ရသော ဘုန်းကြီးများမှာ ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများကို ထောက်ပံနေသာ ပုသိမ်ကျောင်းတိုက် ၊ ဒက္ခိဏကျောင်းတိုက် ၊ နန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်နှင့် မဏိရတနာကျောင်းတိုက်တို့မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များဖြစ်ပြီး ဓမ္မသုခကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်မှာမူ ခရီးလွန်နေ သဖြင့် မသွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းတိုက်များသည် RNDP အကြမ်းဖက်သမားများက နယ်မြေ အကြမ်းဖက် စခန်းများ အဖြစ် အသွင်ပြောင်း စခန်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ကို အဆိုပါ ကျောင်းတိုက်များတွင် စတင်စုဝေး တိုင်ပင်ကြပြီး လိုအပ်သည့် ညွန်ကြားချက်များကို ယင်းကျောင်းတိုက်များမှ တစ်ဆင့်ပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုအပြင် အကြမ်းဖက်သမားများက ၎င်းတို့၏ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များအား အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး မီးရှို့ဖျက်စီးမှု များပြုလုပ်ရန်လောင်စာများကိုလည်း သိုလှောင်ထားကြောင်း။ ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ သတင်းများကြောင့် ယနေ့ ၄ ရက်နေ့တွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးမှာ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးများ အားတွေ့ဆုံရန် ခေါ်ယူထားကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ယင်းသို့ ခေါ်ယူမှုကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးများက စိုးရိမ်နေကြကြောင်း၊ အဆိုပါဘုန်းကြီးများကို နိုင်ငံတော်မှ ထိမ်းသိန်းပါက အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘုန်းကြီးတွေက ရခိုင်ကို ကာကွယ်တာ ရခိုင်လွတ်လပ်ရေးကို ဦးဆောင်တာ ဒီဘုန်းကြီးတွေကို ဖမ်းမယ်ဆိုယင် ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး အစိုးရကို ပြန်လွတ်တဲ့ အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ဟု " ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆိုပါ ဘုန်းကြီး များကို ဆွမ်းကွမ်း ဆည်းကပ်သူ ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရခိုင်အမျိုးသားနှင့် နီးစပ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ခံ တစ်ဦးက FB တွင် ရေးသားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted: 01 Dec 2012 06:16 AM PST
MB Pahang: Kenyataan 'potong telinga' hanya kiasan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob hari ini menjelaskan bahawa beliau hanya berkias ketika menyatakan kesediaannya untuk memotong telinganya jika BN tewas di kawasan Bentong.
"Anda tahu kiasan? Dalam bahasa Inggeris kita ada pengucapan kiasan. Kita ada perumpamaan, kita ada metafora, kita ada hiperbola.....
"Jadi apabila saya kata 'potong telinga saya', itu bermakna (Pakatan) tidak akan menang.
Itu menunjukkan tahap keyakinan.
".... DAP tidak boleh menang di Bentong.
Tidak boleh menang. Jika DAP menang di Bentong, anda potong teliga saya, saya terjun Sungai Pahang.
(DAP) tidak boleh menang," katanya semalam.
Adnan adalah ADUN Pelangai - satu lagi kerusi DUN dalam Parlimen Bentong. -mk
Hello Adnan, kita sekarang hidup dalam dunia sebenar, bukan dunia fantasi atau purbakala, atau mimpi yang penuh dengan metafora dan hiperbola.
Dunia sebenar menuntut pertuturan yang sebenar dan maksud yang sebenar.
Terlajak perahu boleh diundur, terlajak perkataan buruk padahnya... dan sebab pulut santan binasa - sebab muut badan binasa, itu pepatah atau perumpamaan jika masih tidak faham.
Laporan sebelum iniklik untuk baca
Posted: 01 Dec 2012 01:29 AM PST
Posted: 01 Dec 2012 12:43 AM PST
The attack on Pearl Harbour was planned on 15th August 1907, to take out American Naval Forces by the Japanese.
Posted: 01 Dec 2012 03:18 AM PST
Allah Pilih UMNO Untuk Berkuasa.
Kalau dah terdesak, Tuhan juga diheret sama bagi mempertahankan hujah yang sememangnya tidak masuk akal.
Begitulah gelagat yang dilihat dalam perhimpunan agung Umno (PAU) apabila seorang perwakilan mempertahankan Umno daripada usaha PAS yang menganjurkan doa bagi kehancuran parti berkenaan dengan alasan bahawa Allah memilih Umno untuk diberi amanah dah kuasa bagi melakukan kerja Islah di negara ini.
Perwakilan Pemuda Umno, Reezal Merican Naina Merican dalam ucapannya juga berkata, soal menentukan kuasa pentadbiran sesebuah negara adalah hak Allah.
"Umno dah diberi amanah, diberi kuasa.... Apa yang dilakukan? Umno buat pelbagai Islah (perubahan), keluarkan daripada penjajahan kepada kemerdekaan yang lebih mulia, memuliakan Melayu, memberi identiti dan meletakkan Islam di sisi Melayu," katanya.
Dalam ucapannya, Reezal turut mempersoalkan gelaran "Mursyidul Am" yang diberikan PAS kepada pemimpinnya, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat.
Turut menjadi sasarannya ialah Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim yang disifatkannya sebagai "pengkhianat" atas beberapa kenyataan ketua umum KEADILAN itu yang didakwanya menyokong keselamatan Israel.
"Barack Obama, David Cameron tidak (pernah) mengeluarkan (kenyataan).... Tidak ada keluar melainkan ketua pembangkang. Bukankah itu (dikatakan) pengkhianat?," kata Reezal.
Perwakilan lain yang mengikuti ucapan Reezal dilihat ada yang keluar sebaik sahaja dia menghina menteri besar Kelantan itu dengan gelaran yang tidak sepatutnya dituturkan oleh seorang pemimpin.- jalan pulang
Posted: 01 Dec 2012 12:23 AM PST
Let's stop demonizing Israel. The new analogy I invite Arabs to use can be rendered: "Israel IsaSister."
Two days ago, Al Ahram publishedacartoon in whichachild angel asks another: "Were you too killed by an Israeli fighter jet?" The other victim replies: "No, by an Egyptian train,"areference to the tragic collision four days ago ofatrain andaschool bus, which killed 50 children. What's wrong with the analogy?
Asaresearcher in cognitive linguistics and critical discourse analysis, I can say that the reason bad analogies are so dangerous is that they can constrain and direct our policies. The above analogy, for example, highlights that Israel isakiller of innocence, suppressing the fact that Hamas fires rockets at innocent Israeli civilians. Importantly, depicting Israel asademon implies that there can be no peace with it. If this were the case, how can Egypt play the role of peace broker between Israel and Palestine?
Another prominent cartoon appeared in the Jordanian newspaper Al Rayi. In it, Israel is depicted asaserial killer fond of collecting skulls. Again, this analogy hides the fact that in Israel there are innocent civilians, women and children who know nothing about killing. Furthermore, it suppresses the fact that Israel wants peace with its neighbors, as evidenced by its 32-year-old peace treaty with Egypt.
Strikingly, the same analogy (i.e., Israel as serial killer) has been employed by the Egyptian news outlet El-Masry Elyoum, though inadifferent form. The outlet ranapicture in whichasmiling Israeli soldier asks another, while pointing to the word "Gaza" written in skulls, "isn't my handwriting very nice?" The message here is that Israeli soldiers kill for fun, ignoring the fact many of them are wounded or killed. Furthermore, the message is that the soldiers of Israel are irrational. But are they?
Israeli soldiers have to defend themselves, their children, and their wives against Hamas attack. Furthermore, they dream of same things everyone else does: to be able to spendanice weekend with their families, for security, foracalm life. In short, they're not demons.
A fourth striking example can be found in the Saudi economic newspaper Al Iqtisadiah. In it, the Israeli flag is planted on the corpse of an Arab drowning in his own blood. This implies that the Jewish state must be demolished if Arabs want to live, which is another way of saying Israel has no right to exist.
The photos of innocent Palestinian victims made my heart bleed and left me for some days unable to think or write. But viewing Israel asademon is dangerous and doesn't fit the facts very well.
Asageneral finding in cognitive science, ifamental framework doesn't fit the facts, the facts will bounce off and the framework will stay. As such, we need to pay more attention to our metaphors and analogies, especially because as we have seen, demonization of Israel works against peace.
Finally, I recall some important words said once by deposed Egyptian president Hosni Mubarak inaTV interview: "We Egyptians went into wars with Israel, but in the end we sat down together around the table and solved our problems. Importantly, only negotiations can bring peace to the region, as can be read in the book of history."
On this account, let's stop demonizing Israel.
The new analogy I invite Arabs to use can be rendered: "Israel IsaSister." More importantly, the Palestinian people suffer, and so does the Israeli people. In other words, both sides need and want peace. Jerusalem Post
The writer is an Egyptian artist andaPhD student.
Posted: 01 Dec 2012 12:16 AM PST
Today is the 65th anniversary of the passage of UN General Assembly Resolution 181 on the future status of British ruled Palestine. The Guardian's Picture of the Day, Nov. 29, in recognition of this event in history, includes the following iconic image of Israelis celebrating in the streets of Tel Aviv shortly after the UN vote codifying their right to statehood.
Here's the Guardian headline and strap line for the pictorial post.
Do you notice any information missing from the strap line? Well, it seems that they failed to mention one quite significant element of the UN resolution (which passed with 33 votes in favor, 13 against, 10 abstentions and one absent). Res. 181 not only called for the creation ofaJewish state, but the creation of an Arab one as well. The Jews accepted partition.
The Arabs didn't accept partition, refused to compromise on any outcome other thanasingle unitary Arab state and launchedawar when Israel declared independence in May, 1948. While the UN debates Palestinian statehood tonight in NYC, it's important to remember that on this day, 65 years ago,aPalestinian state was offered by the international community, accepted by the Jews, but rejected by the Arabs. CIF
Posted: 01 Dec 2012 12:24 AM PST
(NYP) Some West Bankers may still feel this morning as if they've just won the $587 million Powerball jackpot — but they'll soon realize that, despite the dazzle of yesterday's vote at the United Nations, they had the wrong numbers: There's no grand prize coming. Yes, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas managed to line up an impressive number of General Assembly votes for his resolution naming Palestine asaUN non-member "state." Some 138 countries supported him; nobody in "Old Europe" opposed. Only America, Canada, the Czech Republic, Panama and several Pacific island states joined Israel in voting nay (with 41 abstentions).
And, yes, the world media will wax poetic on Abbas' diplomatic "victory." His carefully crafted resolution enshrined Palestine asanon-member UN "state" within the 1967 borders, including Jerusalem. (No territorial swaps or anything else that requires negotiations with Israel.) It also expressed the hope that the Security Council would soon accept the new state's request to becomeafull member. (America vetoed that request last year.) Yet, privately,European and even some Arab diplomats were grumbling:
* Abbas' move isapoke in President Obama's eye, afterapersonal presidential appeal to delay.
* And — thanks to US law that defunds any UN agency that unilaterally accepts Palestine asamember — it may harm the whole UN system.
And that's from diplomats who voted for the resolution. Hey, that's how Turtle Bay rolls. At the United Nations, no one flinched yesterday when the resolution was introduced by world pariah Sudan, which is responsible for the Darfur genocide.
Nor did anyone flinch hours earlier, when the ambassador of Sri Lanka (which recently put down an insurrection in Tamil regions with unprecedented ruthlessness), spoke in his capacity as chairman of the UN "Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories."
That's the Turtle Bay way.
Last week, only Israel and Palau voted with America to opposeanear-unanimous General Assembly resolution condemning the US embargo of Cuba,avote that's recurred every year since 1960. The Castros crow about their world popularity and the "isolation" of the United States; the Union somehow manages to survive. So, yes, because of the UN's near irrelevancy, Secretary of State Hillary Clinton was right in observing yesterday that the path toaPalestinian state doesn't go through New York.
But the "world community" fears that Abbas is growing irrelevant, so even those who believed the resolution was ill-timed and bad for the peace process supported it. (Still, none of Abbas' Arab "brother" statesmen bothered to show solidarity by sendingahigh-level representative for the vote, as Turkey and Indonesia did.)
Yet the move will at best boost Abbas' popularity among Palestinians forafew days. After all, he's been ruling over the West Bank by decree since his term as an elected president expired back in 2009 — because rival Hamas, which rules Gaza, would win any election byalandslide. And Hamas' self-declared "victory" last month in Gaza has only increased the appeal of the kind of "resistance" preached by the Islamist terrorist organization.
So, in the long run, yesterday's "historic" event won't boost Abbas' popularity among Palestinians.
Speaking of history: On Nov. 29, 1947, Arab leaders rejectedaUN resolution that recommended the establishment of two states, Arab and Jewish, in then-British-mandated Palestine. Ever since, generations of Palestinian leaders have preferred attacking the Jewish state to building an Arab one. And yesterday's maneuver, 65 years later, continues that tradition.
Abbas called on the General Assembly to "issueabirth certificate on the reality of the state of Palestine," but back in the West Bank, that state remainsamirage, and the vote won't change that. Rather, as Abbas & Co. proudly declare, it will empower them to drag Israeli leaders to the International Criminal Court in the Hague. Hence his pointed talk yesterday about Israel's "war crimes."
Israel will survive. At the risk of stereotyping, it'd beacruel joke if in the end the Jews lost out because they're bad lawyers.
But as long as Palestinian leaders keep busy inventing new ways to bedevil Israel rather than improving the lot of their citizens, West Bankers and Gazans will continue to celebrate imaginary winnings — only to realize the next day that they're still no closer to winning the lottery prize. Hat tip: Eye On The World
Posted: 30 Nov 2012 07:01 PM PST
A lot of bravado and chest thumping. Bring on the GE13 and let's see whether you are right or wrong! Read it here.
Posted: 01 Dec 2012 12:02 AM PST
Dewan Negeri Selangor (DNS) hari ini mendapati Datuk Mohd Isa Abu Kasim (BN-Batang Kali) bersalah mengeluarkan kenyataan berbaur seksis terhadap Exco Pelancongan, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar, Elizabeth Wong pada 22 November lalu.
Ekoran itu, Isa dikenakan denda sebanyak RM1,000 melalui potongan Elaun Khas Ahli Dewan Negeri.
Keputusan itu ditetapkan Speaker DNS, Datuk Teng Chang Khim setelah mengambil kira persetujuan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) dalam usul pindaan berhubung mengenakan denda kepada Isa.
"Bahawasanya dewan yang mulia ini mengambil ketetapan untuk mengenakan denda RM1,000 yang akan dipotong dari Elaun Khas Ahli Dewan Negeri ke atas Adun Kawasan Batang Kali terhadap kenyataan seksis yang dikeluarkan oleh beliau terhadap Adun Bukit Lanjan pada 22 November 2012 semasa sesi penggulungan Yang Berhormat Bukit Lanjan yang berbunyi "…(Tapi) jangan sampai terlupa jaga hutan kita sendiri"," katanya.
Bagaimanapun, keputusan itu dipertikaikan Isa dengan mendakwa Speaker tidak berlaku adil terhadapnya ekoran kenyataannya tempoh hari tidak melanggar mana-mana peraturan tetap dewan.
Namun, Teng menegaskan tindakan itu adalah adil berdasarkan Peraturan 36(4) di mana Adun dilarang untuk menggunakan bahasa biadap.
"Bagi saya itu mencukupi untuk membuktikan kenyataan yang dikeluarkan adalah berbaur seksis," ujarnya.
Usul berkenaan dibawa Gan Pei Nei (PKR-Rawang) dan disokong oleh kumpulan penyokong Kerajaan Pakatan Rakyat.
Tidak puashati dengan keputusan usul tersebut Adun-adun BN bertindak keluar dewan sebaik Speaker membacakan keputusannya. -selangorku
Posted: 30 Nov 2012 09:50 PM PST
During the recent attacks on Myanmar Muslims, Islam, OIC and Ethnic Cleansing of Rohingyas:
We were Not Hurt By The Harsh Words Of our Enemies; Rakhine Radicals, Rakhine Bigot Monks, Hmuu Zaw and hardliners from Myanmar Military,
BUT By The Silence Of our beloved Daw Aung San Suu Kyi, NLD, Democrats, President U Thein Sein and other Friends.
Adapted from the famous quote of Shakespeare "In The Times Of Crisis I Was Not Hurt By The Harsh Words Of My Enemies, But By The Silence Of My Friends
Posted: 30 Nov 2012 09:26 PM PST
It is the school break and two of my friends sent their kids to me this morning to knock them into shape.
It has been one looooooooooooooooooooooooooooooong Saturday morning and I am fully convinced I have lost at least one kilo from frustration.
One of them attends an international school in Penang. Last week, I asked him to studyatable of irregular verbs and I tested him this morning. I nearly hadamassive cardiac arrest when I marked his answers. Here'saselection of some of his 'unforgettable answers. After writing this post, I must check my floor to see how much hair I have lost from the shock of it all. :-(
1. awake : He wrote awaked (past tense) and awaken (past participle).
Correct answer: awake-awoke-awakened
2. bear: He wrote beared (past tense) and beared (past participle).
Correct answer: bear-bore-borne
3. begin: He wrote began (past tense) and begar (past participle).
Correct answer: begin-began-begun
4. bend: He wrote bended (past tense) and ben (past participle).
Correct answer: bend-bent-bent
5. bleed: He wrote blead (past tense) and blead (past participle).
Correct answer: bleed-bled-bled
6. break: He wrote breaked (past tense) and broke (past participle).
Correct answer: brek-broke-broken
7. drive: He wrote drove (past tense) and droven (past participle).
Correct answer: drive-drove-driven
8. kneel: He wrote kneeled (past tense) and kneel (past participle).
Correct answer: kneel-knelt-knelt
9. shake: He wrote shoke (past tense) and shaken (past participle).
Correct answer: shake-shook-shaken
10. swell: He wrote swelt (past tense) and swellen (past participle).
Correct answer: swell- swelled-swollen
MOST UNFORGETTABLE ANSWER OF THE CENTURY:
11. keep: He wrote kept (past tense) and kepten (past participle).
Correct answer: kept - kept - kept
As if this was not enough, he told me that the previous weekend, he was at Pulau Song Song with some PSC members and how two girls were attacked by sea sergeants.
Having been to Pulau Song Songacouple of times during my snorkelling/diving days decades ago, I asked if he meant sea urchins and then he smiled and nodded.
A few weeks earlier, another friend's son who isafourth former atapremier school wrote:
The car slew down before it reached the traffic lights.
Slew? Sarcastically, I asked him what he meant. Quite confidently, he said 'slew' is the past tense of 'slow'!!!
So I told him it is 'slowed' and he pronounced it as 'slow-ed' in two syllables.
"Slow-d? Got suchaword meh?" he asked in typical Manglish.
Just yesterday, I spent thirty minutes teachingaYear3student fromapremier local school all about the apostrophe. She did not know how to write contractions and it was an ordeal for both of us.
Even after I explained many times and wrote the rules clearly, highlighted the apostophe etc, she wrote:
It was only the fifth attempt that she got it right.
If you think all this is incorrigible, I hadacollege student who misinterpretedapast year question on how super powers have impacted the world negatively. She wrote about the horrors the world might have experienced if Hitler had the powers of Spiderman. I am not joking. After I explained why her answer was wrong, I asked her to either a) re-write that essay (with the correct approach) or b) to choose another question and then send me the answer. Unbelievably, she sent meacorrected version of the original essay withashort message saying she followed by the rules I taught in class etc and how she hoped that even though it was largely nonsense, she hoped I would mark it. She dropped out of my class.
The sad reality is that many school students do not have the ability to think for themselves. I have written about this tragic scenario so many times that I am sick and tired of it. Suffice to say that our country is likely to be in dire straits in the future for there is little that workers/graduates can offer. In terms of knowledge, discipline, innovation, quality of human/natural resources, we have fallen way behind that of our neighbours.
A significant number of my acquaintances are making big bucks in Indonesia/India and some have migrated there, started business there and keep telling me that 80% of the urban population is largely middle class and how despite the existence of similar problems, the populace is well aware of the need to invest the best in education to be on par with or better than neighbouring countries.
There are so many horror stories I have seen for myself and heard from my friends in education, even in industry(horrible slide presentations filled with grammatical/spelling errors and presenters who cannot pronounce words correctly) and in the legal sector (e.g. Can you told us what you saw?).
With the deplorable standard in education, teaching standards, curriculum and the lack of fluency in English, it will bealong, winding and rocky road ahead.....
Pardon my pessimism but while such problems worsen, many are still fighting as to who will win the next GE.
As for me, it does not matter who will win because either way, we are onadownward spiral....
Posted: 30 Nov 2012 08:59 PM PST
၂၀.၁၁.၂၀၁၂ issue News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) မှာ ဆောင်းပါးရှင် သရဝဏ် (ပြည်) – အမည်ရင်း ဦးညီညီ ဆို တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က "အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအကြောင်း" https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/posts/448696681834805 ခေါင်းစဉ် နဲ့ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးမှာ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် အတော်များများ လွဲမှားနေရုံမက၊ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး တစ်ရပ်လည်းဖြစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ရှိနေတဲ့ ဘာသာကြီးတွေထဲ တစ်ရပ်လည်းဖြစ်တဲ့ "အစ္စလာမ်" ဘာသာ[ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အခန်း (၈) နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ။ စာမျက်နှာ ၁၅၁] နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူများ အထင်အမြင်လွဲမှားစေဖို့ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ထိပါး ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် သရဝဏ် (ပြည်) ဟာ သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးရေးသားရာမှာ အဓိက ကိုးကားခဲ့တဲ့ အရင်းအမြစ် ဟာ Dr. Sripali Vaiamon ဆိုသူရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါး "Buddhist History of Afghanistan and South India" ဖြစ်ပါတယ်။ သရဝဏ် (ပြည်) ဟာ အဲဒီဆောင်းပါးကို ကိုးကားရုံတင်မကပါ။ အချို့စာပိုဒ်တွေ ကို အပိုဒ်လိုက် ဘာသာပြန်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ထည့်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းအပေါ်မှာ သစ္စာ တည်ချင် တဲ့ ကျွန်တော် ရဲရင့်သစ္စာ က သရဝဏ် (ပြည်) ဆိုသူရဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးပါအလွဲအမှားတွေ ၊ ထိပါးမှုတွေ ကို ထောက်ပြ ပေးသွားပါ့မယ်။ ကျွန်တော် ထောက်ပြတဲ့ အချက်တွေကို သရဝဏ် (ပြည်) နဲ့ တကွ News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) က ဘယ်ပညာရှင်မဆို ပြန်လည် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း နဲ့ အကယ်၍များကျွန်တော့်ထောက်ပြချက်တွေ ကို ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ပြန်လည် ကန့်ကွက် မဆွေးနွေးနိုင်ရင် သရဝဏ် (ပြည်) အနေနဲ့ရော၊ News Watch (စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) အနေနဲ့ရော လွဲမှားတဲ့ အချက်တွေ အတွက် ဂျာနယ် က တစ်ဆင့် တရားဝင် တောင်းပန်စေလိုပါတယ်။ အဲဒီလို မှ မပြုမူ ဆိုရင်တော့ တရားဥပဒေ အရ တရားစွဲဆို သွားမှာဖြစ်ကြောင်း လေးစား စွာ ကတိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်။ အလွဲအမှားတွေကို ထောက်ပြခြင်းအမှု စတင်ပါပြီ။
၁။ သရဝဏ် (ပြည်) – အစ္စလာမ်ဝါဒ မထွန်းကားမီ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အဓိကကိုးကွယ်သော ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ- အစ္စလာမ်ဝါဒ မထွန်းကားမီ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အဓိက ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ က ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာ မထွန်းကားမီ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာကြီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သရဝဏ် (ပြည်) အကိုးအကားပြုထားတဲ့ Wikipedia မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Afghanistan မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဝါဒ မထွန်းကားမီ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အဓိက ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ က ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ် လို့ သရဝဏ် (ပြည်) က တိုက်ရိုက်ရေးမထားပါဘူး။ သို့တစေလည်း စာဖတ်သူ တွေအနေနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သွားအောင်ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများကို ဗဟုသုတ ရစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ public media တစ်ခုမှာ သမိုင်းဆောင်းပါး ရေးသူ ဟာ အဲဒီလို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေမည့် အရေးအသားမျိုးကို မရေးသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သရဝဏ် (ပြည်) ဟာ စာရေး သီကုံးရာမှာ အတွေ့အကြုံနည်းပါးလို့ မှားတာဆိုရင် ပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်း အမှုကို ပြုသင့်ပါတယ်။ ပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်း အမှုမပြုရင်တော့ unethical writing "ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသော ရေးသားမှု"လို့ ကျွန်တော် အမည်တပ်ရပါလိမ့်မယ်။
၂။ သရဝဏ် (ပြည်) – ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကို အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးခရိုင် ဂန်ဒါရာတွင် ထည်ထားခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ထိုဒေသကို ကန်ဒါဟာ ခေါ်ကြသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ- ရှေးခေတ် အာဖဂန်နစ္စတန် ကဘူးခရိုင် က ဂန်ဒါရာ (Gandhara) သည် ယနေ့ခေတ် ကန်ဒါဟာလို့ခေါ်တဲ့ ဒေသ ဖြစ်ကြောင်းရေးထားခြင်း ဟာ အလွဲကြီးလွဲမှားနေပြန်ပါတယ်။ Gandhara ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန် အရှေ့ဖက် မှာ တည်ရှိခဲ့ကြောင်း http://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် ကန်ဒါဟာ (Kandahar) ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန် တောင်ပိုင်းမှာ ရှိကြောင်း http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar မှာလေ့လာကြည့်ပါ။ ကဘူး (Kabul) ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန် အရှေ့ပိုင်းမှာရှိကြောင်းကိုလည်း http://en.wikipedia.org/wiki/Kabul မှာ လေ့လာ ကြည့်ပါ။ သရဝဏ် (ပြည်) အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကမ္ဘာ့မြေပုံ တစ်ခုကိုဆောင်ထားပြီး၊ စာရေးသားခြင်းမပြုမီ အရင်လေ့လာသင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ ဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရဝဏ် (ပြည်) က ကမ္ဘာ့ မြို့တွေအကြောင်း အလွဲတွေရေးနေရင် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီး အပါအဝင် တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာရှင်တွေ ပါ ထိခိုက်နိုင်ရုံ မက နိုင်ငံတော်ကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါ ထိခိုက်ဖွယ်ရာရှိလာနိုင်လို့ဒီလို အကြံပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သရဝဏ် (ပြည်) -မကြာသေးမီ အချိန်ပိုင်းက ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ လော်ဂျာပြည်နယ်(ကဘူးမြို့တောင်ဘက်)တွင် ဗုဒ္ဓ၏ ဓါတ်တော်မွေတော် ၄၂ ဆူကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ- အာဖနစ္စတန် မှာ လော်ဂျာ ဆိုတဲ့ပြည်နယ် မရှိပါဘူး။ လိုဂရ် ပြည်နယ် (Logar Province) ဘဲရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ၏ ဓါတ်တော်မွေတော် ၄၂ ဆူကိုတူးဖော် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နေရာ ဟာ လိုဂရ် ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ လိုဂရ် အသံထွက်ကို သရဝဏ် (ပြည်) က ကျကျနန မလေ့လာဘဲ ရေးသားမိတဲ့ အတွက် ဒီလိုလွဲမှားရခြင်းဖြစ်မှာပါ။ ဂျာနယ် တစ်ခုရဲ့ ဆောင်းပါးရှင် တစ်ဦး အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာ စကားဝေါဟာရတွေကို ခေါ်ဝေါ်ရေးသားရာမှာ အသံထွက် မှန် ဖို့အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ထင်ရာမြင်ရာ အသံထွက်တွေ လျှောက်ရေးရင် စာဖတ်သူတွေ ကို အသိအမှား ပေးနေသလိုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လေ့လာပါ သရဝဏ် (ပြည်)။
၄။ သရဝဏ် (ပြည်) – မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပထမဆုံး ဥပသကာနှစ်ပါးဖြစ်သော တဖုဿနှင့် ဘလိက ကုန်သည် ညီနောင်နှစ်ပါးသည် သူတို့၏ ဇာတိမြို့ဖြစ်သော ဘာသ်မြို့တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ——-
ရဲရင့်သစ္စာ- Tapassu နဲ့ Bhallika တဖုဿနှင့် ဘလိက တို့ရဲ့ ဇာတိမြို့ ဟာ Balkh ဖြစ်ပါတယ်။ "ဗလ်ခ်" လို့အသံထွက်ရပါတယ်။ ဘာသ် မဟုတ်ပါဘူး။
၅။ သရဝဏ် (ပြည်) – ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဂျပန်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များလွှတ်ကာ ထိုသို့မလုပ်ဖို့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ရဲရင့်သစ္စာ- တာလီဘန် တွေ ဗာမီယန် ရုပ်ပွါးတော်ကြီး နှစ်ဆူ ကို ဒိုင်းနမိုက် နဲ့ ဖြိုခွဲမယ် လုပ်တုန်းက အစ္စလာမ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗျ ၊ ပါကစ္စတန် နဲ့ UAE နိုင်ငံ တို့ ဟာ အစ္စလာမ် နိုင်ငံ ၅၇ နိုင်ငံစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ OIC (ယခင် Organization of Islamic Conference၊ ယခု Organization of Islamic Cooperation) နဲ့အတူ တရားဝင် ကမ္ဘာသိ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီး၊ ရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေ ကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ဖြိုခွဲအပြီးမှာတော့ ဆော်ဒီအာရေဗျ နဲ့ UAE နိုင်ငံ တို့ က တာလီဘန်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ကမ္ဘာသိ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းတွေ ကိုသရဝဏ် (ပြည်) က ဆောင်းပါးမှာ ထည့်မရေးတဲ့ အတွက် မရိုးသားရာရောက်နေကြောင်း (သို့) သမိုင်းဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးနိုင်ရန် အရည်အချင်းမှီသူမဟုတ်ကြောင်း။
၆။ သရဝဏ် (ပြည်) – ထိုဒေသတွင်တော့ အုပ်ချုပ်သူ ပြည်နယ်ဘုရင်ခံများသည် ဂျာလာလာဘတ် အနီးရွာများတွင်ဟိန္ဒူ၊ မူဆလင်၊ အာဖဂန် မိန်းမများစွာကိုယူကာ အစ္စလာမ်ဘာသာ တိုးတက်အောင် လုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု အေဒီ ၉၈၂ ရေးသားသော ဟူဒတ်အယ်အလမ် (Hudud-al-Alam)ဆိုသော စာအုပ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရဲရင့်သစ္စာ- အထက်ပါ စာပိုဒ် ကို သရဝဏ် (ပြည်) က ဘယ်ကျမ်း စာအုပ်ထဲ က ကူးရေးထားလဲ မသိပါ။ သရဝဏ် (ပြည်) အနေနဲ့ "ဟုဒူဒုလ်အာလမ်" စာအုပ်ကိုမြင်ဖူးခဲ့ခြင်း ရှိမှာတောင်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်အသေအချာဆိုဝံ့ပါတယ်။သရဝဏ် (ပြည်) က ကျမ်းကိုး အဖြစ် ဖော်ပြထား တဲ့ Wikipedia : Islamic conquest of Afghanistan http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_conquest_of_Afghanistan ကို လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ Willem Vogelsang ရဲ့ "The Afghans" စာအုပ် ကို ကိုးကားပြီးဒီလိုရေးထား တာ တွေ့ရပါတယ်။
" Inabook called Hudud-al-Alam, written in 982, it mentionsavillage near Jalalabad, Afghanistan, where the local king used to have many Hindu, Muslim and Afghan wives" ဘာသာပြန်ပြရရင်-
[ ၁၉၈၂ နှစ် မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ "ဟုဒူဒုလ်အာလမ်" (ကမ္ဘာ့နယ်စည်းများ) စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားတာ က အာဖဂန်နစ္စတန်ဂျလာလ်အာဘားဒ် အနီး ရွာတစ်ရွာမှာ ဒေသခံဘုရင်ဟာ ဟိန္ဒူ ၊ မွတ်စ်လင်မ် နဲ့အာဖဂန် မိန်းမ အမြောက်အများ ယူကြောင်း]ဒေသခံဘုရင်လို့ ဆိုထားတော့ အဲဒီဘုရင်တွေ ဟာ ဟိန္ဒူ (သို့) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ဖြစ်နိုင်တာ ရာနှုန်း အတော်များနေပါတယ်။ မိန်းမတွေ အများကြီး ယူပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုတိုးတက်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ မပါပါဘူး။ မူရင်း အကိုးအကားမှာမပါပဲ၊ သရဝဏ် (ပြည်) ဟာ မိမိစိတ်တွေးထင်ရာ ကို ထည့်ရေးပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို တိုက်ခိုက် ထားတဲ့ အတွက် သရဝဏ် (ပြည်) ကို "လူလိမ်" လို့ ကျွန်တော် သမုတ် လိုက်တဲ့အပြင် သရဝဏ် (ပြည်) နဲ့ တကွ News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) တာဝန်ရှိသူတွေ မိမိ အမှားကို တရားဝင်ဝန်ခံတောင်းပန်ခြင်း မပြုရင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တရားလိုပြုပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ တရားစွဲဆို ပါ့မယ်။ လေ့လာထားစေချင်တာ က ပြစ်မှုဆိုင် ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၅-က။
ဆက်ရန်-သရဝဏ် (ပြည်) ၊ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ် နှင့် ရဲရင့်သစ္စာ ၏ သစ္စာ (၂)
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သရဝဏ် (ပြည်) – အမည်ရင်း ဦးညီညီ ဆို တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က "အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း အကြောင်း မူရင်းဆောင်းပါး
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သရဝဏ် (ပြည်) – အမည်ရင်း ဦးညီညီ ဆို တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် က "အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျောက်ကွယ် သွားခြင်းအကြောင်း မူရင်းဆောင်းပါး
သရဝဏ် (ပြည်) ၊ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ် နှင့် ရဲရင့်သစ္စာ ၏ သစ္စာ (၂)
by Ye Yint Thitsar
၇။ သရဝဏ် (ပြည်) - ဘော်လ်ကာဒေသသည် ဇောရိုးဝါဒ Zoroaster (အီရန်နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သော ဘုရားသခင် ဘက်တော်သားများသည် မိစ္ဆာ၀ါဒီများကို အဆက်မပြတ်
တိုက်ခိုက်သုတ်သင်ရေးဝါဒ)၏ မူလ ဘူတ စတင်မွေးဖွားရာ နေရာဖြစ်နေသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ – သရဝဏ် (ပြည်) က Dr. Sripali Vaiamon ရဲ့ Buddhist History of Afghanistan and South India ဆောင်းပါးကို ဘုရားဟောတမျှ လုံးဝ ဥဿုံမျက်စိမှိတ် ယုံကြည်ထား ပုံရပါတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းပါးမှာ Balka လို့ရေးထားတိုင်း သရဝဏ် (ပြည်) က ဘော်လ်ကာဒေသ လို့ လိုက်ရေးထားပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန် က အဲဒီဒေသကို Balka လို့ မခေါ်ပါဘူး။ Balkh (ဗလ်ခ်) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ တဲ့ အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ သိပ္ပံ ဝိဇ္ဇာ စွယ်စုံပညာရှင်ကြီးတွေ (polymaths) ထဲက အထင်ကရ တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်း အာဂုံဆောင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပညာရှင်ကြီး အိဗ်နုစီနာ (လက်တင်အမည်-Avicenna) ရဲ့ဖခင် ဟာ Balkh မြို့သားပါ။ Balkh မြို့ကို ဂရိလို Bactra လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ (ကိုးကား-Avicenna His Life and Work, Soheil M. Afnan Ph.D, George Allen and Unwin Ltd. London, 1958) ဇိုရိုအက်စတာဝါဒဟာ "ဘုရားသခင်ဘက်တော်သားများသည် မိစ္ဆာ၀ါဒီများကို အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက် သုတ်သင်ရေးဝါဒ" ဖြစ်ကြောင်း သရဝဏ် (ပြည်) ဘယ်က လေ့လာ သိရှိထားပါသလဲ မေးချင်ပါတယ်။ "Zoroaster" ဆိုတာ "Zarathustra" ဆိုတဲ့ အမည်ကို ဥရောပ က အသစ်တီထွင်ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့ အမည်ပါဘဲ။ "Zoroaster" ဘာသာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ဘာသာကို "ဘုရားသခင်ဘက်တော်သားများသည် မိစ္ဆာ၀ါဒီများကို အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်သုတ်သင်ရေးဝါဒ" လို့အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါ။
(ကိုးကား- The Oxford Dictionary of the World Religions, Oxford University Press, 1997)
၈။ သရဝဏ် (ပြည်) - တမန်တော်မိုဟာမက် ကွယ်လွန်ပြီး နှစ် ၃၀ ကြာသောအခါ (အေဒီ ၆၀၀) အာရပ်မူဆလင်များသည် ပါရှားကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက် ဘက်တားရီး
ယားဒေသကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာ ဘော်လ်ကာဒေသ (Balka)သို့ပါ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ရဲရင့်သစ္စာ – အာရပ် တွေ ပါရှားကို အောင်နိုင်ခဲ့တာ အေဒီ ၆၀၀ မဟုတ်ပါဘူး။ တမန်တော်မုဟမ္မဒ် ကွယ်လွန်ခဲ့တာ အေဒီ (၆၃၂) ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်တွေ ပါရှား အင်ပါယာကို အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်ဟာ အေဒီ ၆၅၁ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုးကား-The Oxford History of Islam, Oxford University Press, 1999)။ သရဝဏ် (ပြည်) အနေနဲ့စိတ်တွေးထင်ရာတွေ မရေးသင့်ပါ။
၉။ သရဝဏ် (ပြည်) – ၎င်းတို့ အုပ်စိုးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို လူခွန် စတင်ကောက်ခံခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းကန် စေတီ ပုထိုးများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်
ပူဇော်ကန်တော့သူများကိုလည်း ဘုရားဖူးခွန်များ ကောက်ခံခဲ့သည်။ ကဘူးရှိ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းများကိုဝင်ရောက်လုယက် ဖျက်ဆီးကြပြီး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို အောင်ပွဲ
အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ယူငင်သိမ်းပိုက်ကြသည်။ နာကျဉ်းဖွယ် အနိုင်ကျင့်ခံရမှုသည် ဤမှာပင်စသည်။ ကဘူးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် တဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပြီး နောက်
ရဲရင့်သစ္စာ – အာရပ်တွေ (အုမ်မေယာဒ် မင်းဆက်) ဟာ Bactra (Balkh) ဒေသကို အုပ်စိုးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေကို သာမက၊ အစ္စလာမ် မဟုတ်တဲ့ အခြားဘာသာဝင် အားလုံးကို ဂျိဇ်ယာ (Jizya) လို့ခေါ်တဲ့ တာဝန်ခံအခွန် (သို့) ကာကွယ်ရေး အခွန် ကောက်ခံ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Jizya ဟာ ဘာသာခြားတိုင်းအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အခွန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာခြားတွေထဲမှာမှ သန်သန်မာမာ စစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောက်ျား တွေအပေါ်မှာသာကောက်ခံတာပါ။ အမျိုးသမီးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကလေးသူငယ် တွေ မစွမ်းသူတွေ နဲ့ ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေ အပေါ်လုံးဝကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ ဇကားသ် လို့ ခေါတဲ့ အလှု ကို မဖြစ်မနေပေးရသလို၊ ဘာသာခြားတွေ ကတော့(Jizya) ကို မဖြစ်မနေပေးရပါတယ်။ အကယ်၍ ဘာသာခြား ဟာ စစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Jizya ကို ပေးစရာမလိုပါ။ ဆင်းရဲလွန်းလို့ Jizya မပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာခြား ကို Jizya ကင်း လွတ်ခွင့် ပေးပါတယ်။ (ကိုးကား- The Oxford Dictionary of the World Religions,Oxford University Press, 1997) အာရပ်တွေ Bactria ကို အုပ်စိုးစဉ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းထိုင်ရဟန်း တစ်ပါး ဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကူးပြောင်းသက် ဝင် ယုံကြည်ခဲ့ကြကြောင်း၊ Nava Vihara ကျောင်းတိုက်ကြီး ဟာ မွတ်စ်လင်မ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ စည်ပင်စွာ လည်ပတ်လျှက်ရှိကြောင်း ဟန်တရုတ်လူမျိုး ဘုရားဖူး Yijing (I-ching) ကိုယ်တိုင် အေဒီ ၆၈၀ မှာ Nava Vihara ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီကျောင်းတိုက် ဟာ Sarvastivada (ပါဠှိ-သဗ္ဗတ္ထိဝါဒ) သင်ကြားရာ ဗဟိုဌာနေအဖြစ်စည်ပင်လျှက်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်လို့ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်သုတေသီ ဒေါက်တာ Alexander Berzin က Historical Sketch of Buddhism and Islam in Afghanistan http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/study/history_buddhism/buddhism_central_asia/history_afghanistan_buddhism.html မှာအတိအလင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဘုရားဖူးတွေ ကို အခွန်ကောက်ခံတာ ကတော့ မဆန်းပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း ဆော်ဒီအာရေဗျ ကို ဟဂ်ျခရီးသွားတဲ့ မွတ်စ်လင်မ် တွေ၊ဂယာ အပါအဝင် သံဝေဇနိယလေးဌာန ကို ဘုရားဖူးသွားတဲ့ သူတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေ က ခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ငွေကြေးကောက်ခံတာ ရှိပါတယ်။ အာရပ်တွေ က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ဝင်ရောက်လုယက်ဖျက်စီးတယ်ဆိုတာတွေ၊ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယူငင်သိမ်းပိုက်ကြတယ်ဆိုတာတွေ၊ အနိုင်ကျင့်တယ် ဆိုတာတွေ ဟာ စာပေမတတ်သမိုင်းမသိရှာသူတွေ (သို့) စာပေတတ် သမိုင်းသိသော်လည်း၊ လိမ်တတ် ညာတတ် ကောက်ကျစ်တတ်တဲ့ သူတွေ ရဲ့ အောက်တန်းကျစွာ မဟုတ်မမှန် ဖြန့် ချီတဲ့ ဝါဒဆိုးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
သရဝဏ် (ပြည်) ၊ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ် နှင့် ရဲရင့်သစ္စာ ၏ သစ္စာ (၃)
၁၀။ သရဝဏ် (ပြည်) – အာရပ်တို့ အာဖဂန်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး အစ္စလာမ်ဝါဒ ကို သယ်ဆောင်လာဖို့ စစ်ရေးဖြင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအခါ အာဖဂန်ဒေသခံ တောင်ပေါ်သားတို့သည်၎င်းတို့၏ ပိုက်နက်နယ်မြေကို လက်နက်စွဲကိုင်ကာ ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြပေသည်။
ရဲရင့်သစ္စာ – အာရပ်တွေ ဟာ အာဖဂန် ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ တာ အစ္စလာမ်ဝါဒ ကို စစ်ရေးနဲ့ဖြန့် ချီဖို့ဖြစ်ကြောင်း သရဝဏ် (ပြည်) က ရေးသားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို ထိုးနှက်ထားပါတယ်။ အာရပ်တွေက အာဖဂန် ကို ဝင်မတိုက်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်း က အဲဒီ ဒေသ ကို ပါရှန်းတွေ ထံ က မစီဒိုနီယားဘုရင် မဟာအလက်ဇန္ဒား က တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဂရိတွေ အုပ်စိုး၊ တာ့ခ်တွေ ဝင်တိုက်၊ ကူရှန် တွေ ဝင်တိုက် မင်းဆက်တွေ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အေဒီ ၅ ရာစု နဲ့ ၆ရာစုတွေ မှာ Hephthalite (ခေါ်) ဟန်ဖြူ (White Huns) လူမျိုးတွေ ဝင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဒေသ ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကူရှန်မင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ကူရှန် တွေ ဟာ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုးကား-Encyclopaedia Britannica, entries : Balkh, Hun, Kushan Dynasty ၊ A Brief History of Afghanistan Shaista Wahab and Barry Youngerman, University of Nebraska at Omaha, 2010)
အာဖဂန် နစ္စတန် မှာ အမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာလုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ထေရဝါဒီ တွေ က အဓမ္မဝါဒလို့သမုတ်ထားတဲ့ မဟာသံဃိက ဂိုဏ်းသာ အာဖဂန် နစ္စတန် မှာ အမြစ်တွယ် ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာ Dr. Alexander Berzin က သူ့ရဲ့Historical Sketch of Buddhism and Islam in Afghanistan မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ တာလီဘန် တွေ က ၂၀၀၁ မှာ ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ ဗာမီယန် ရုပ်ပွါးတော် ဟာ မဟာသံဃိက ဂိုဏ်း ကနေထပ်ပြီး ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ လောကုတ္တရ ဝါဒီ တွေ က ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ် ကြောင်းလည်းအထက်ပါ သုတေသနစာတမ်း မှာရေးသားထားပါသေးတယ်။ အေဒီ ၅၁၅ မှာ ဟန်ဖြူ (White Huns) လူမျိုး ဘုရင် Mihirakula က ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ဖိနှိပ်ခဲ့ပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ကို ဖျက်ဆီး၊ ဘုန်းကြီး အမြောက်အများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းရေးသားထားပါတယ်။ ဒါတွေ ဟာ အာရပ်တွေ အာဖဂန်ဒေသထဲဝင်မလာခင် အခြေအနေတွေပါ။
မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ Alexander Berzin ရဲ့ အထက်ပါသုတေသန စာတမ်း http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/study/history_buddhism/buddhism_central_asia/history_afghanistan_buddhism.htm lကို သေချာလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် အာရပ် တွေ ဟာ အာဖဂန် နစ္စတန် ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး အစ္စလာမ်ဝါဒကို သယ်ဆောင်လာဖို့ စစ်ရေးနဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း အလွန်ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ အာရပ်မွတ်စ်လင်မ် တွေ ဟာအာဖဂန်နစ္စတန် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ အနေနဲ့ သမိုင်းကျမ်းတွေ ကို ကိုးကားပြနိုင် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု မပြသေးပဲ သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ နောက်နောင်လိုအပ်လာတဲ့ အခါ အသုံးပြုဖို့ပါ။ အစ္စလာမ် ဘာသာကို စစ်ရေးနဲ့ဖြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရေးအသား က မွတ်စ်လင်မ် တစ်ဦး အတွက်တင် မက အစ္စလာမ် ဘာသာ ကျမ်းစာတွေ ကို အစွဲကင်းကင်း ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ လေ့လာ ဖူးသူပညာရှင်တိုင်းအတွက် ဟာသ သဖွယ်သာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
ကုရ်အာန်ကျမ်း ၂း၂၅၆ မှာ -
"ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော (အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏) တရားလမ်းစဉ် သည် မမှန်ကန်သော လမ်းစဉ်နှင့်(သိသိသာသာ) ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာ ကွဲပြားခြားနား လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေရာ (မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ အစ္စလာမ်)သာသနာတော်တွင်း၌ (ဝင်ရောက်ရန်အတွက်) အတင်းအဓမ္မ အနိုင်အထက် အလျင်းမပြုရ။"
၁၁။ သရဝဏ် (ပြည်) – အာရပ်များသည် ဒေသခံများကို အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်စေရန် အတင်းအကျပ် ဘာသာပြောင်းစေရန် ကြံဆောင်မှုမှာ ကနဦးတွင် အာဖဂန်တောင်ပေါ်သား များ ၏ အဆက်မပြတ် အပြင်းအထန် ခုခံတော် လှန်မှုကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ရဲရင့်သစ္စာ – အထက်ပါ စာသားတွေ ကတော့ Wiki: Islamic conquest of Afghanistan entry ထဲက စာတစ်ကြောင်း ကို သရဝဏ်(ပြည်) က မိမိစိတ်တွေးထင်ရာ စကားလုံးတွေတမင်တကာ ထည့်သွင်းပြီးဘာသာပြန်ထားခြင်းပါဘဲ။ Wiki မှာရေးထားတဲ့ မူရင်းစာသားတွေ က အောက်မှာပါ။
"The Arabs were unable to succeed in converting the population of that area because of constant revolts from the mountain tribes."
အထက်ပါစာပိုဒ် မှာ "အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်စေရန် အတင်းအကျပ်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ လုံးဝ မပါရှိပါ။ သရဝဏ် (ပြည်) ရဲ့ တမင်တကာလိမ်လည်လုပ်ကြံရေးသားထားမှု ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တို့လေ့လာကြပါ။
သရဝဏ် (ပြည်) – အေဒီ ၈၇၀ တွင်မူ ယနေ့ခေတ် အာဖဂန်နစ္စတန်ဟုခေါ်တွင်နေသော နေရာတော်တော်များများ ကို ရာကွတ်ဘင်လာသီဆာဖာ ဆိုသူက တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ အစ္စလာမ်ဝါဒကို စစ်ရေးဖြင့် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
ရဲရင့်သစ္စာ – အဲဒီ စာပိုဒ်မှာပါတဲ့ Yaʿqūb ibn Layth al-Ṣaffār ဆိုသူဟာ Saffarid မင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီလူ ဟာ အာရပ်လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါရှန်းလူမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လူ ဟာ ဓားပြ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စစ် တပ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ အေဒီ ၈၇၈ မှာ သူဟာ ဘဂ္ဂဒတ် မြို့မှာ နန်းစိုက်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် Caliph ကို စစ်တိုက်ဖို့တောင် စစ်ချီခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း Encyclopaedia Britannica, Yaʿqūb ibn Layth al-Ṣaffār entry မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သရဝဏ် (ပြည်) က Wiki: Islamic conquest of Afghanistan entry ထဲက idea ကို ယူပြီး မိမိဘာသာလုပ်ကြံထားတဲ့ စကားလုံးတွေထည့်သွင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း Wiki ထဲ က စာသားတွေ ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
"The fanatic founder of this dynasty, the coppersmith's apprentice Yaqub ibn Layth Saffari, came forth from his capital at Zaranj in 870 and marched through Bost, Kandahar, Ghazni, Kabul, Bamyan, Balkh and Herat, conquering in the name of Islam"
အဲဒီစာပိုဒ်မှာ ယာကွတ် ကို "The fanatic" လို့သုံးနှုန်းထားပြီး၊ သူ ဟာ အစ္စလာမ် အမည်ကို အသုံးပြုပြီး ဘို့စ်၊ ကန်ဒဟရ်၊ ကဘူးလ်၊ ဗာမ်ယန်၊ ဗလ်ခ်၊ ဟီရတ် နယ်တွေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရေးထားတာပါ။ အဲဒီ စာပိုဒ်မှာ "အစ္စလာမ်ဝါဒကို စစ်ရေးဖြင့် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်"လို့ ဆိုလိုတဲ့ အရေးအသားလုံးဝ မပါရှိပါ။
အာဖဂန် ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် ဘုရင် အချို့ဟာ အခြားဘာသာဝင်တွေ ကို နှိပ်ကွပ်တာတွေ ၊ အာဏာစက် နဲ့ ဘာသာပြောင်းအောင် လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ် ဘာသာ က အဲဒီလို လုပ်ဖို့ သင်ကြားထားလို့ လုပ်တာမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါ။
သရဝဏ် (ပြည်) – အေဒီ ၉၉၈ နှင့် ၁၀၃၀ ကြားတွင် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော တူရကီမင်းဆက် စူလတန် မိုဟာမက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ၁၇ ကြိမ်ခန့် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် တွင် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းလဲဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။
ရဲရင့်သစ္စာ – အေဒီ ၉၉၈ နှင့် ၁၀၃၀ ကြားတွင် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော တူရကီမင်း ဟာ စူလ်တန်မဟ်မူဒ်ဂဇ်နီပါ။ စူလ်တန် မိုဟာမက် မဟုတ်ပါ။ စူလ်တန်မဟ်မူဒ်ဂဇ်နီ (အေဒီ ၉၇၁-၁၀၃၀) ဟာ မူလက အာဖဂန်အိန္ဒိယ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ရှိအိုက် တွေကို စစ်ပြုခဲ့ရုံမက၊အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ ဟိန္ဒူ ဘုရင်တွေကို လည်း ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မူလ စစ်ဆင်ရေးဟာ အိစ်မာအိလီရှိအိုက် တွေကိုဦး တည်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အိန္ဒိယက ဟိန္ဒူရှာဟီဘုရင်တွေနဲ့ နယ်ပယ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါ တယ်။ သူဟာ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်လုယက်ဖျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းတိုက်တစ်ချို့ကို ဖျက်စီးခဲ့တာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ သို့သော်စူလ်တန်မဟ်မူဒ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဥဒ္ဒိယန (ဩရစ္စ) ဟာ တန္တရဝါဒဖြန့်ချီရာ ဗဟိုဌာန ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ စည်ပင်ထွန်းကားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ မရှိခဲ့ကြောင်း Harvard University က ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင် ဒေါက်တာ အလက်ဇန္ဒား ဘာဇင်န် က သူ့ရဲ့ The Historical Interaction between the Buddhist and IslamicCultures before the Mongol Empire, (၂၀၀၆)၊ The Ghaznavid Campaign in Gandhara and Northwestern India ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီဘုရင်ဟာ ရှိအိုက် နဲ့ဘူယစ်ဒ်တွေ (Buyid) အပေါ် အဓိကထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၊ အစပိုင်းမှာဟိန္ဒူတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သူ့ ခေတ်မှာ လူအချို့ကဂေါတမဗုဒ္ဓကို တမန်တော် တစ်ပါးအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြကြောင်း၊ ပါရှန်း သမိုင်းပညာရှင်ကြီး အလ်ဗိရူနီ ကဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကို အကောင်းမြင်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင် ဒေါက်တာအလက်ဇန္ဒားဘာဇင်န် ရဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ မှတ်တမ်း မှာရေးသားထားပါသေးတယ်။ ဒါဟာ သမိုင်းအမှန်ပါ။ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ လူသားမှန်ရင် သမိုင်း အမှန်ကို လက်ခံရဲ ရုံမက၊ ကျန်လူသားတွေရှေ့လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ချပြတတ် ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အာဖဂန်ဘုရင်စူလ်တန်မဟ်မူဒ် ရဲ့မင်းဆက်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ်ဖိနှိပ်မှု တွေမရှိခဲ့ကြောင်း၊ Nava Vihara (နောင်ဝ်ဗဟာရ်) မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာ သာနံရံ ဆေးရေးပန်းချီ အနုပညာ လက်ရာတွေ နဲ့ အာဖဂန်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဗာမီယန်ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေကို လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ ကြောင်း၊ Sogdia တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တွေဟာလည်း လှုပ်ရှား အသက်ဝင်စည်ပင်ထွန်းကားလျှက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတွေနဲ့မွတ်စ်လင်မ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေဟာ ဘေးချင်းယှဉ်လျှက် ငြိမ်းချမ်းစွာတည်ရှိခဲ့ကြောင်းအထက်ပါ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရှင် ဒေါက်တာအလက်ဇန္ဒားဘာဇင်န် ကရေးသားထားပါတယ်။
ဆက်ရန်-သရဝဏ် (ပြည်) ၊ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ် နှင့် ရဲရင့်သစ္စာ ၏ သစ္စာ (၄)